Fanavaozana ny ORTM | Primature
Mahazoarivo, ny 03 desambra 2020 – Tonga nanome voninahitra ny lanonana nanolorana ny asa fanarenana sy fanavaozana natao teo anivon’ny ORTM, izay rantsa mangaikan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolotsaina, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
« Manova ny tantaran’ny firenena isika », hoy ny Praiminisitra ka « mandray anjara amin’izany tanjona lehibe izany ny sampandraharaha ara-panjakana rehetra ». Izay indrindra no antony nitondrana fanavaozana eo anivon’ny haino aman-jerim-panjakana, ka namboarina sy nohatsaraina ny eto amin’ny foibe ORTM, toy ny birao maro, nampiana ihany koa ny trano famokarana, ary nohatsaraina ny kalitaon’ny feo eo anivon’ny RNM.
Nambaran’ny Praiminisitra fa maro ireo fanamby miandry antsika raha tiana hapetraka sy haverina indray ny lazan’izany haino aman-jerim-panjakana izany, ary efa ezaka goavana ny fanavaozana natao mba hifanaraka amin’ny vaninandro ankehitriny ireo fitaovana ampiasaina. « Andrarezin’ny haino aman-jery eto amin’ny firenena ny TVM sy RNM ; mba hahatongavana amin’izany anefa dia mila fanovàna ny fomba fisainana, mila atao mby an-tsaina lalandava fa ny fananam-panjakana dia fananam-bahoaka », hoy hatrany izy.
Nilaza ihany koa ny Praiminisitra nandritra ny lahateniny fa « adidin’ny haino aman-jerim-bahoaka ny mitondra fanentanana ho an’ny vahoaka, indrindra amin’ny fanabeazana mba hananana olom-pirenena vanona ka hampiova ny toe-tsain’ny tsirairay hanaja sy hikolokola ary hiaro ireo fananana iombonana ». Araka izany dia ilaina ny famokarana fandaharana isan-karazany mampianatra sy manabe ny olom-pirenena, fa fanamby mipetraka ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fijerena ny maha-olona, ka hanentanana amin’ny fandrindram-piterahana ary ny fikolokoloina ny fianakaviana sy ny ankohonana malagasy.
Teo am-pamaranana dia nankasitraka ireo ezaka efa nataon’ny ORTM sy ny ministera mpiahy azy ny Lehiben’ny governamanta, raha tsy hilaza afa-tsy ny fandraisana andraikitra nandritra ireny hamehana ara-pahasalamana ireny. Eo ihany koa ny fijerena ny fampitaovana ireo TVM sy RNM eny ifotony, toy ny fanavaozana ireo « plateau technique », ary ny fampitaovana « émetteur » vaovao izay mahenika distrika 75. Irariana, hoy izy, ny hitohizan’ny ezaka, indrindra amin’ny fanatsarana ny fitantanana, mba ho tena hisy fiantraikany eny amin’ny vahoaka ny asa rehetra hatao, ka ho reharehan’ny firenena ny fananana izany haino aman-jerim-panjakana izany.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 02 Décembre 2020
Tatitra ankapobeny 2020 teo anivon’ny Tafika Malagasy →